iOS 14: ny vaovao rehetra fantatsika - iPhone News | Vaovao IPhone
iOS 14 no handimby ny iOS 13, ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Apple. Andrasana izany natolotra tamin'ny volana Jona 2020, na dia tsy misy fanamafisana ofisialy aza hatreto.
Raha ny fitoviana amin'ny fitaovana dia azo apetraka amin'ireo rehetra afaka manavao ny iOS 13. Noho izany, ho kely dia kely ny haavon'ny fanilihana.
Anatin'ireo zava-baovao, manantena izahay fa:
Fampiharana fanatanjahan-tena vaovao, miaraka amin'ny mahazatra sy horonan-tsary izay manampy anao hanana fiainana salama. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy famantarana fa voaloa ity fampiharana ity, ka antenainay fa maimaim-poana ho an'ny mpampiasa rehetra ny fampiasana azy.
Fampiasana vaovao amin'ny hafatra, izay mety hahitana ny fitanisana ireo mpampiasa hafa (@ mpampiasa) sy mamafa ny hafatra efa nalefa.
Amin'izao fotoana izao dia mbola kely ny fampahalalana momba azy, fa hampahafantatra anao ny fandrosoana farany amin'ny vaovao azonao jerena eto ambany izahay.
Nilaza i Apple fa vetivety ny fanapahan-kevitra hanavao ny iOS 14
Tamin'ny herinandro lasa, Apple dia nanambara fa hampitsahatra ny fanavaozana ny iOS 14 ho gaga ny tsirairay…
IOS 14.8.1 dia azo alaina ho an'ireo mpampiasa izay tsy nanavao ny iOS 15
ny Ignatius Room hace 7 volana .
Andro iray taorian'ny famoahana ny iOS 15.1 sy iPadOS 15.1 dia namoaka fanavaozana vaovao ny lehilahy avy ao Cupertino ...
iOS 15.1 dia tsy mamaha ny olan'ny bateria amin'ny iPhones taloha
ny Miguel Hernandez hace 7 volana .
Ny iPhone amin'ny dikan-teny teo aloha, indrindra ny iPhone 12 sy ny iPhone 11, dia nanolotra olana lehibe momba ny fizakan-tena ...
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 14.8 i Apple
ny Ignatius Room hace 8 volana .
Toy ny mahazatra, Apple dia manaraka ny protokolata hampiatoana ny fanaovan-tsonia ny kinova taloha ...
Fotoana hanavaozana izao! IOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 ary macOS Big Sur 11.6 misy izao
ny Jordi Gimenez hace 8 volana .
Ora vitsy lasa izay, navoaka ny kinova farany farany an'ny iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 ary macOS Big ...
Ny kinova an'ny iOS 14 dia mety hahatratra ny kinova 14.8 voalohany amin'ny tantaran'ny rindrambaiko
ny Jordi Gimenez hace 9 volana .
Ny kinova rindrambaiko Apple ho an'ny fitaovany dia mitohy miovaova miaraka amin'ny fanovana tsy tapaka ary ny ankehitriny ...
ny Ignatius Room hace 10 volana .
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia namoaka ny iOS 14.7.1 tamin'ny herinandro lasa teo, kinova izay saika azo inoana ho farany ...
Torohevitra sy tetika IPadOS 15 hahazoana tombony betsaka amin'izany
ny Miguel Hernandez hace 10 volana .
Ny fahatongavan'i iOS 15 dia miha-manakaiky, izany no antony tsy ananantsika safidy afa tsy ...
Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny iOS 14.6
Ho an'ny mpampiasa maro, anisan'izany ny tenako, ny iOS 14.6 dia narary andoha tokoa momba ny ...
ny Tony Cortes hace 10 volana .
Haingana i Apple nanamboatra ny bibikely mamoha Apple Watch. Herinandro fotsiny vao ...
Apple ny antsipiriany momba ny fiarovana vaovao ho an'ny iPadOS sy iOS 14.7
ny Angel Gonzalez hace 10 volana .
Andro vitsy lasa izay dia namoaka Apple taorian'ny kinova beta dimy iPadOS sy iOS 14.7 ho an'ny fitaovana mifanentana. Ny beta navoaka ...